Eidnes gard "Smio" - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIvar
Wamkelekile kwifama ye-Eidnes "Smio". Indawo ibekwe kakuhle kwifama yama-apile i-Eidnes eLofthus eHardanger. Ukuba uza kuhamba ngeDronningstien okanye iMunketrepene, i-Eidnes yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala. I-Eplegarden ifumaneka ekuqaleni kwe-Dronningstien, malunga ne-1 km ngaphezu kweziko. "I-Smio" ikwisakhiwo sefama efama, kunye nokungena kwayo. Indlu yakhiwe / yanikezelwa entsha ehlotyeni ka-2018, kubandakanya i-terrace enkulu engaphandle. Apha ilanga langokuhlwa linokonwatyiswa ngombono omkhulu wefjord kunye nefolgefonna!
Ukuza kuthi ga ngo-1975, kwakukho umkhandi weskithe efama kwaye yayiyenye yabona bavelisi abakhulu belizwe. Le ndlu indibiza ngokuba ndinguSmio, kuba ikwidolophu enye naleyo wayeyiyo lo smithy. Namhlanje kukho imveliso yeapile kunye nejusi yeapile efama.
Le ndawo ibizwa ngokuba yi "Smio" (Smithy), kuba yayikhe yaba ngumkhandi apho de kwangowe-1975. Ifama yayingomnye wabavelisi abakhulu bescythe eNorway. Namhlanje ifama ivelisa iApile kunye nejusi yeApile.
4.96 · Izimvo eziyi-56
Indawo ezolileyo enomxube olula wabahlali abasisigxina, izindlu zasehlotyeni kunye nezindlu zasefama. Lala ecaleni kwe-cul-de-sac (hayi ngetrafikhi ..).
Indawo ezolileyo, izindlu zasehlotyeni ezimbalwa kunye neefama ezimbalwa zama-apile.
Umbuki zindwendwe ngu- Ivar
Umnini-mhlaba uyafumaneka kwiselula kunye ne-imeyile. Okanye umise ngaseyadini ngaphaya kwendlela unkqonkqoze, apho urenta khona umninimzi.
Umamkeli uyafumaneka kwiselula kunye ne-imeyile. Okanye unkqonkqoze kwindlu engummelwane, apho uhlala khona.
Umamkeli uyafumaneka kwiselul…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ullensvang